IziBonelelo eziMnandi zeMpilo eNtsha xa usonwabela iwayini yaseFrance
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iiwayini kunye neMimoya » IziBonelelo eziMnandi zeMpilo eNtsha xa usonwabela iwayini yaseFrance
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeMpilo • iindaba • Tourism • komzila Ngoku • Iiwayini kunye neMimoya
Ukusela iglasi yewayini yesiFrentshi ngemini kunokunceda isifo i-Alzheimer, iCancer, iMoss Loss, iBone Density, Amehlo asempilweni, iCholesterol ephezulu, isifo sesibindi, ukubetha, ukudakumba, imingxunya, ingqele eqhelekileyo. Nasi isizathu:
Itsheki efrijini nakwikhabhathi yewayini kunye neGRRRR. Iibhotile ZIKHULU!
Ndifuna iglasi yewayini (mhlawumbi kancinci ngaphezulu) -kodwa ngokuqinisekileyo ayiyibhotile. Kwenziwe ntoni?
Hlanganisa i-gin kunye ne-tonic okanye i-scotch ematyeni, okanye ulungiselele i-Diet Coke (ayizange ibe yinto efanelekileyo)?
Phantse iminyaka emibini, ndivalelwe kwindawo ebonakala ngathi iyancipha, umzuzu ngomzuzu. Iwotshi ekhompyutheni yam ibonakala ngathi ihamba kancinci, kwaye kuthatha ngonaphakade ukufikelela kwixesha lokumisa ngokusemthethweni. Okokugqibela, yintsimbi yesi-5, ixesha elifanelekileyo lokuvala kwaye uvule ibhotile yewayini yesiFrentshi.
Imifanekiso yewayini yaseFrance
Kukho amanqanaba amanqanaba olonwabo ahambelana nokucinga malunga newayini yaseFrance: iindawo ezindala zokutyela ezindala, izidiliya eziluhlaza eziluhlaza; imidiliya ilenga iidiliya iphuphuma ngamandla; umoya omnandi omtsha, kunye nomoya opholileyo ococekileyo kunye nokuchumisa kwendalo; isandi seenyosi esivuna incindi yokondla abasebenzi bazo.
Kwaye ke, kukho iwayini ngokwayo. Iewayini zaseFransi kunqabile ukuba ubuqili - uyayithanda into ebetha impumlo yakho, unxibe ulwimi lwakho, uhlala kancinci emlonyeni wakho, kwaye ushiya inkumbulo etyelela ngokukhawuleza kwaye inyamalale kancinci… ukuvumela umzuzu ofanelekileyo wokuphakamisa iglasi ngolindelo lwesiphu esilandelayo… okanye awunayo.
Kangangeenkulungwane, iwayini zase-France bezisoloko zinqweneleka, zithandwa, kwaye zisela isiselo kwihlabathi liphela. Uluvo lwaseFrance "terroir" lubandakanya yonke into ukusuka kubushushu bommandla ukuya kwiasidi yomhlaba - zonke zinempembelelo kwaye zichaphazela umgangatho, incasa, ivumba, kunye nencasa yomdiliya osetyenziselwa ukuvelisa iwayini.
Ukutyhubela imbali, iimeko zokusingqongileyo zibe nefuthe kwiwayini, ukusukela ekufudumaleni kwehlabathi ukuya kwimizi-mveliso, kunye nokuhamba kwabemi, ukuya kuthotho lweminye imisitho enesidima kwaye ingenakulawulwa. Okwangoku, imiceli mngeni ejongene nabenzi bewayini baseFrance kubandakanya iirhafu, ukulibaziseka kwempahla, ukungabikho kweekhonteyina, ukufika kade, ukuhla kwemali, kunye "nendlovu egumbini," i-COVID-19. Ngayo yonke imicimbi ejongene neshishini lewayini laseFrance, ishishini eliqeshe abasebenzi abamalunga nama-558,000 (2017), abantu bayoyika ukuba uninzi lwezidiliya ezincinci zosapho azizokwazi ukumelana nokuhlaselwa kwemiceli mngeni kwaye zisondele okanye zithengisele abavelisi bewayini abakhulu.
Ubunyani bothuko kwimakethi yewayini yaseFrance ibothusile njengoko intengiso yeewayini ezimnandi ilawulwa yiFrance, iBordeaux kunye neBurgundy accounting ngokulandelelana kufutshane neepesenti ezingama-50 kunye neepesenti ezingama-20 zomsebenzi wokurhweba ngo-2019 (Live-ex. com). Ngethamsanqa, zikhona iindaba ezimnandi-kwisiqingatha sokuqala sika-2021, iFrance yathumela ngaphandle i-7.3 yezigidi zehektare zewayini ezixabisa i-5.1 yezigidigidi zeerandi ezimele ukwanda kweepesenti ezili-15 ngomthamo kunye neepesenti ezingama-40 ngexabiso xa kuthelekiswa neenyanga ezintandathu zokuqala zika-2020, ngexesha lokutshixa . Ukuthunyelwa kwewayini laseFrance kudlula abo ngexesha lomsinga wokuqala we-COVID kwaye babuyela kumanqanaba okukhula ngaphezulu kokusebenza kwangaphambili kwe-COVID.
Imakethi yaseMelika iphinda ithenge iwayini yaseFrance okoko kwamiswa iirhafu zikaTrump / zeAirbus zeewayini ezingasathethiyo ngokuthunyelwa kwewayini ehlwahlwazayo, kubandakanya neChampagnes. Nge-Epreli ka-2021 i-France yathumela ngaphandle iihektare ezingama-221,000 zewayini ezixabisa i-208 Euro ezilingana nomthamo omangalisayo wama-90 weepesenti kunye ne-131 yepesenti yokunyuka kwexabiso xa kuthelekiswa no-Epreli 2020 (vitisphere.com).
Izibonelelo zokusela iwayini
Kuyamangalisa ukwazi ukuba ukusela iglasi yewayini yaseFrance kuyilungele impilo yam njengoko iidiliya zingumthombo wezibonelelo ezininzi. Iwayini ihambisa i-manganese, i-potassium, i-iron, i-phosphorus kunye ne-Vitamin B6. Iqulethe nemagniziyam, izimbiwa ezinokunceda ukunciphisa uxinzelelo lwegazi kunye namanqanaba eswekile yegazi, ukunciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo, isifo seswekile kunye nokubetha. I-antioxidants kwiwayini yokulwa nomonakalo weeseli kwimizimba yethu ebangelwa kukuguga kunye nemeko zokusingqongileyo ezinje ngongcoliseko kunye nendlela yokuphila. Ngokuthintela kunye nokubuyisela umva oku monakalo weseli ukutya okuphezulu kwii-antioxidants kunokunciphisa umngcipheko wokukhula kwezifo ezinganyangekiyo kubandakanya nomhlaza.
French iwayini lunyango olumnandi kwii-dieters njengoko kukho ii-calories ezili-121 kuphela kwi-150 yeemililitha zewayini emhlophe kwaye ii-sips eziphakathi zinokukhuthaza impilo yezintso, kwaye zikhusele kwisifo se-Alzheimer's. Iwayini ebomvu (ene-khalori ezili-127) inevithamini kunye neeminerali eziphezulu kwaye iqulethe phantse amaxesha ali-10 inani leepolyphenols (izityalo ezinezixhobo zokulwa ne-antioxidant) njengewayini emhlophe.
Ke-kukho iindaba kunye neendaba ezimnandi. Iwayini zaseFrance ziyafumaneka e-USA kwaye azingcamli nje kuphela, kodwa zilungile nakwimpilo yam.
Nangona kunjalo, ndisenayo ingxaki yobungakanani bebhotile. Ibhotile enee-ounces ezingama-25 zamanzi ngoku yamkelwe ngokubanzi njengomgangatho wewayini. Kutshanje, iibhotile ezincinci ziye zafumaneka ngokubanzi. Impembelelo yeebhotile ezincinci ekusebenziseni ayaziwa nangona ibhotile encinci inamandla okunciphisa ukusetyenziswa ngokwandisa umzamo ofunekayo wokuvula nokusebenzisa ngaphezulu kwebhotile enye. Iibhotile ezincinci zinokunyusa ukusetyenziswa ngokunciphisa izithintelo kwaye ke kunyuse ukuphindaphindeka kweziqendu zokusela. Isixa sewayini esigcinwe kwiibhotile ezincinci sinokubonwa sincinci kakhulu. Uphononongo lubonisa ukuba ukubonakaliswa okubonakalayo kubungakanani bezabelo ezinkulu kunokuhlengahlengisa imbono yokuba yintoni isahlulo esiqhelekileyo "esiqhelekileyo". Ukuba iibhotile ezincinci zibonwa ngathi zincinci kakhulu, oku kungaqondanga kungakhokelela ekusetyenzisweni kakhulu kwewayini, njengoko iibhotile ezongezelelekileyo zivulwa zize zisetyenziswe ngexesha lomsitho wokusela.
Iindaba ezimnandi zezokuba iwayini ye-LGV ifumaneka kwiisilinda ezincinci zeplastikhi ezi-6.3 (8 intshi ubude, ububanzi obungaphezulu kancinci kwe-intshi enye ngentambo yesikere), enikezela nje kancinci ngaphezu komyinge ophakathi othululwe kwiglasi yewayini isip efanelekileyo njengoko ndihleli ndedwa phambi kwescompyuter sam, ndizama ukuhlala ndiphaphile ngexesha lentlanganiso ye-Zoom.
Ngelixa obu bungakanani benkonzo enye inkuthazo kum yokugcina isitokhwe sewayini ebomvu kunye newayini ye-LGV kwikhabhathi yam yewayini kwaye ibanda kwifriji, ndifuna ukusela iwayini ezilungileyo okanye ezingcono kunayo nayiphi na into ekhoyo ngobukhulu obukhulu.
Iindaba ezimnandi ngakumbi. I-LGV isebenzisene nee-winery ezininzi ezikhokelwa okanye zakhokelwa ngabasetyhini, kubandakanya u-Elisabeth Prataviera (Domaine de Menard & Haut-Marin), Ines Andrieu (Domaine de Caylus) kunye noMartine Nadal (Domaine Nadal Hainaut) - zonke zinxulunyaniswa nezidiliya zendalo ezisebenza ngokuzinzileyo. ukulima.
Ngeebhotile zeplastikhi ezinobungakanani obuncinci, iwayini igqibelele ngosayizi, ikhuthaza ulingelo kunye nokuhlola iwayini ebomvu, emhlophe kunye ne rose evela kubavelisi bewayini.
1. U-Ines Andrieu. I-Domaine Caylus Rose Blend 2020. Umdibaniso weediliya ezikhulisiweyo zisebenzisa iSyrah (iipesenti ezingama-60) kunye neGrenache (iipesenti ezingama-40).
Ukusuka kumazantsi eFrance (i-Pays d'Heralult-icandelo lengingqi enkulu yeLanguedoc-Roussillon), olu luthando kwindawo yokuqala ekhanyayo iwayini epinki (ndingayifanisa nefrock yasehlotyeni yale coral / pink pink). Ivumba lenu livuyisa impumlo yam njengoko ihambisa iingcebiso zestrawberry kunye ne-citrus. Inkalakahla iyakholiswa ziingcebiso zama-apile, iipayinapile kunye nentwana yeziqholo. Kukulungele ukufunxwa echibini njengoko ilanga litshona kunye nokuqubha ukubuyela ukulungiselela isidlo sangokuhlwa.
2. UGerard Damidot. I-Chateau Val d'Arenc Bandol 2020. Umxube we-Mourvèdre (iipesenti ezingama-80), iGrenache (iipesenti ezili-10) kunye neConsault (iipesenti ezili-10).
Ifumaneka eProvence (ipasentaba, iQuartier Val d'Arenc), lo mhlaba ulawulwa ngumenzi we wayini uGerald Damidot (waseBurgundy) otshintshe isidiliya saba yindlela yokulima (2015) kwaye le nkqubo inefuthe elihle kumgangatho weediliya. Umhlaba wesidiliya wenziwe ngelitye lekalika, iifosili, isanti enamatye amdaka, udongwe olungumdongwe kunye nelitye lentlabathi elingenayo i-pesticide okanye imichiza naphi na; ukuthena kunye nemisebenzi yokuvuna igqityiwe ngesandla. I-Bandol ithathwa njengeyona rose liphezulu laseFrance lihlala likwindawo ephezulu kunamanqaku angama-90.
I-Bandol iveza umbala wepinki we-beige emehlweni, ihambisa ukungcangcazela kwepesika emhlophe, i-pink grapefruit, istrawberry, ilamuni kunye ne lime kwiimpumlo, ngelixa amajikijolo kunye ne-sitrasi zisonwabisa inkalakahla. Iasidi eqaqambileyo kunye nepholileyo iyenza ibe yi-BFF efanelekileyo yeesaladi, i-quiche, i-bouillabaisse, kunye neepikniksi ezibandayo zenkukhu.
3. Elisabeth Prataviera. Domaine de Menard. I-Sauvignon Blanc (iipesenti ezili-100) ngo-2020.
Iihektare ezili-150 zezidiliya zibekwe kwilali encinci yaseGondrin, kwindawo ye-IGP yaseCote de Gascony kumhlaba wamandulo apho izidiliya zityalwe kumhlaba ongekho nzulu, elityeni, kumhlaba osisityebi osetyenziswa kuphela izichumisi eziphilayo. Ukuvunwa kugqitywa ebusuku okanye ekuseni.
Isibheno samehlo siphantse samanzi amnandi acace gca. Cinga iintyatyambo kunye neziqhamo (ngakumbi i-grapefruit, ii-apile, kunye neelamuni) ezihambisa ivumba elinjengentwasahlobo empumlweni. Iintyatyambo ezininzi kuneziqhamo zithambisa inkalakahla ngokumangalisa ngokumangalisayo kunye nokukhanya okuncinci kweasidi. Kukulungele ukutyela entwasahlobo nasehlotyeni ngesalmon kunye nemisila yamanzi abandayo okanye ukonwabele "ukuma wedwa."
4. UMartine noJean-Marie Nadal. UMartine Nadal. UNadal-Hainaut. ICabernet Sauvignon (iipesenti ezili-100) ngo-2019.
UJean Marie Nadal sisizukulwana sesihlanu kwilifa esineehektare ezingama-43 ezityalwe ngemidiliya entliziyweni yeLanguedoc-Roussillon (ukuqala ngo-1826). Njengomnini kunye nomenzi wewayini, uNadal uxhasa ezolimo ezizinzileyo kwaye ngo-2010 waguqula lo msebenzi waba lilimo lezinto eziphilayo. Iidiliya zivunwa kwakusasa zize zihlelwe ngesandla phambi kokuba zibekwe etankini. Ukwaluphele kwimigqomo emitsha yom-oki yesiFrentshi.
Ukuba umbala omfusa omnyama ubonakala emehlweni akho kunye nevumba lama-cherries amnyama avuthiweyo kunye neenkuni ezimanzi (nzulu ehlathini), amaqunube amnyama, iplums kunye neziqhamo ezibomvu ezimnyama ziyayonwabisa inkalakahla yakho, ihambisa iitannins ezinesibindi… umbono wakho yeyewayini emnandi, uya kuba yinkampu eyonwabileyo nolu lonwabo amava. Bhangqa nenyama yenkomo eyosiweyo, inyama yenkomo okanye ipasta.
5. ULaurence noStephane Dupuch. Peyredon Crus Bourgeois Haut-Medoc 2019. Umxube weCabernet Sauvignon (iipesenti ezingama-63), iMerlot (iipesenti ezingama-37).
ICrus Bourgeois lucalucalulo lwe wayini yaseBordeaux, eFrance eyaqalwa ngo-1932 yaza yaqalwa ngoFebruwari 20, 2020. Iquka kuphela iwayini ebomvu eveliswe kwizibizo ezisibhozo kwingingqi ye-Left Bank Medoc eyayinganxulunyaniswa nokuhlelwa kwewayini ngo-1855. Okwangoku ithathwa ngokuba “ibalasele.” Olu luhlu luhlaziywa rhoqo kwiminyaka emihlanu.
Izidiliya ezingama-24 zi-Poujeaux. Iigarnet hues zivuza iliso ngelixa impumlo ihlekiswa ngeziqhamo zamatye, i-toast entsha kunye nesinongo esincinci. Ilifa lethu livelisa iwayini e-oki yesiFrentshi enobudala obuneetoni ezimnyama zekherrant kunye neengcebiso zevanilla, icuba, amaqunube amnyama, iiplamu kunye nolusu. Bhangqa nenyama yenkomo, inyama yehagu kunye nenyama eyosiweyo.